I-Asus TUF Dash F15, amandla kunye noyilo zinokuhamba | | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 25/07/2021 13:00 | ngokubanzi, Iikhompyuter, Iilaptop, Reviews
Iikhompyuter zedesktop ziya zingabikho kwiidesktops, enyanisweni, nabona badlali, abona baphulaphuli baphambili kolu hlobo lwekhompyuter, baya kwifomathi ephathekayo kule minyaka idlulileyo ngenxa yoyilo olutsha kunye neempawu ezinamandla abazibonelelayo.
I-Asus Dash F15, ilaptop yokudlala enezinto ezibalaseleyo kunye noyilo olwenza ukuba isebenziseka lula, ifika kwitafile yovavanyo. Siza kuhlalutya ngokunzulu le laptop idumileyo onokuthi uze kuyo ngeempawu zayo kodwa uya kuthi ekugqibeleni uthenge uyilo, ungaphoswa.
Njengakwezinye iimeko ezininzi, i kwakhona Gcwalisa ividiyo phezulu uyakubonisa ifayile ye unboxing kunye neempawu zayo eziphambili zoyilo. Ungalibali ukubhalisela itshaneli yethu yeYouTube ukuze siqhubeke nokukuzisa lo mxholo unomdla. Ukuba uyithandile, ungayithenga kwiAmazon ngexabiso elifanelekileyo.
1 Izixhobo kunye noyilo: Ubuhle ngaphandle kwenkohlakalo
2 I-Hardware kunye ne-GPU zisithembisa ngekamva
4 Ukuvavanywa nokupholisa
5 Imultimedia kunye namava ngokubanzi
Izixhobo kunye noyilo: Ubuhle ngaphandle kwenkohlakalo
Ukuba kukho into endenza ndingakhululeki malunga neekhompyuter zemidlalo, yimigca yabo enoburharha, imibala yabo eqaqambileyo kunye nobukhulu babo obuninzi. UAsus kule TUF Dash F15 uyithatha yonke loo nto kwaye ayipolishe, njengedayimani. Sinekhompyuter eneprofayile ye-19,9 millimeter, eyenziwe nge-hybrid yesinyithi kunye neeplastiki ezihlangabezana nemigangatho yasemkhosini ye-MIL-STD, Ukuhlala ixesha elide yinto ebalulekileyo kuzo zonke iimveliso ze-ASUS kwaye koku ngekhe kube kuncinci.
Sinobukho bemibala emibini, ifayile ye- Ukukhanya kwenyanga okuMhlophe kunye ne-Eclipse Grey (ngombala omhlophe kwaye ungwevu mnyama). Kwicandelo elingaphezulu sine-initials TUF kunye nelogo entsha yophawu. Sihlalutye imodeli ngwevu emnyama ukuze sigxile kuyo. Kula macala omabini sinezibuko lokudibanisa esiza kuthetha ngalo kamva. Isakhelo sokubonisa, nangona sibhityile, sinendawo enkulu esezantsi. Ubunzima obupheleleyo be-2 Kg, ngaphandle kokuba yi-panacea, kukukhanya koko kubonelelwa licandelo.
I-Hardware kunye ne-GPU zisithembisa ngekamva
Ngokucacileyo siza kuqala ngeyona nto ibaluleke kakhulu, itafile yokubalula apho sibalaselisa iprosesa I-Intel Core i7-11 370H 3,3 GHz enee-4 cores (I-12M cache, ukuya kuthi ga kwi-4,8 GHz). Ukuyihambisa, sinayo Windows 10 Ekhaya lifakwe kuqala simahla Windows 11 uhlaziyo. Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, le modeli ihamba kunye imodyuli yesibini yememori eyi-8GB 4MHz DDR3200, ngesikhundla esinokulungelelaniswa ukuya kuthi ga kwi-32 GB ye-RAM.
Inkqubo: I-Intel Core i7-11 370H 3,3 GHz enee-4 cores
I-RAM: I-16 GB DDR4 3200 MHz
SSD: I-512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0
GPU: IGeForce RTX 3070 NVIDIA
Ukugcinwa kweyunithi evavanyiweyo yi-512 GB ye-M.2 NVMe PCIe imemori ye-3.0 SSD ebonelela ngesantya kwiimvavanyo zethu ze 3400 MB / s funda kunye nokubhala okungama-2300 MB / s, ngaphezulu kokwaneleyo ukuhambisa i-OS kunye nemidlalo yevidiyo. Singakwazi, ewe, ukukhetha iyunithi efanayo kubungakanani be-1 TB.
Ngoku sijolise kwinto ebalulekileyo, I-NVIDIA GeForce RTX 3070 eya kuthi ijongane necandelo lomzobo kwaye inikezele ngeenguqulelo zayo «ilaptop» yokusebenza eGeekbenck yamanqaku ayi-121069, kufutshane kakhulu kwinguqulelo yedesktop yeNVIDIA GeForce RTX3070.
Siqala ngokudibana ngokomzimba, Kwicala lasekhohlo sinezibuko lamandla obunini, isibuko esigcweleyo seGigabit RJC45, i-HDMI 2.0b, i-USB 3.2 kunye ne-USB-C yeThunderbolt 4 - ukuKhutshwa kwaMandla okuhamba neJack 3,5mm. Kwicala lasekunene sine-standard standard ye-USB 3.2 kunye nesitshixo seKensington.
I-USB-C yeNdudumo 4 PD
Ngokucacileyo, ukuba icandelo elinentambo liphelele, naloo nto I-USB-C iyahambelana nokubek 'esweni i-4K kwi-60Hz kunye nemithwalo ukuya kuthi ga kwi-100W, yecandelo elingenazingcingo alinakuba ngaphantsi. Si I-Bluetooth 5.0 kunye ne-WiFi 6, Eli candelo lokugqibela kwiimvavanyo zethu livelise imvakalelo ephikisanayo kunye neenethiwekhi ze-5 GHz apho uluhlu luye lwancitshiswa kwaye i-ping isenokungabi ngendlela oyifunayo, sicebisa ukuba kusetyenziswe intambo ngaphandle kokuhambelana okuphezulu.
Ikhompyuter ineefeni ezine, i-blade ezingama-83 inye, kunye nenkqubo ephuculweyo yokupholisa uthuli. Imibhobho emihlanu yokufudumeza iyonke isixhobo esipheleleyo kwaye iziphumo ebezilindelwe ngumntu kwikhompyuter yolu hlobo phakathi ehlotyeni, kushushu, kushushu kakhulu. Nangona kunjalo, asifumananga ziphumo zicaphukisayo okanye ezahluke kakhulu kukhuphiswano, ke ukupholisa kubonakala ngathi kwanele.
Thenga i-Asus TUF Dash F15 kwiAmazon
Kuvavanyo lwethu, ukusebenza kwekhompyuter KwiiCity Skylines, umnxeba weDuty Warzone kunye ne-CS GO sinamazinga aphezulu e-FPS, ngaphandle kwengxaki zokusebenza okanye ukufudumeza. Ngezizathu ezicacileyo, ilaptop iya kuba nakho ukuphatha uninzi lwekhathalogu yakho kwezona meko zibalaseleyo zokujonga.
Imultimedia kunye namava ngokubanzi
Asiyi kuhamba ngaphandle kokuthetha ngesikrini, Sinepaneli ye-intshi eyi-15,6-intshi kwi-16: 9 ratio, Ndiyayithanda unyango lwe-anti-glare kwaye iyakwazi ukubonisa i-100 ye-sRGB spectrum, ngenqanaba lokuhlaziya le-120 Hz engalunganga kwipaneli ye-IPS. Ewe ukukhanya kunokuphuculwa, nangona singakhange sifumane idatha ngqo malunga nokuqaqamba kwayo nge-cd / m2 nganye. Isandi sicacile kwaye sinamandla ngokwaneleyo ukonwabela umxholo wemultimedia, kunye nendawo elungileyo ngokubanzi.
Asinayo ikhamera yewebhu
Ikhibhodi inohambo olulungileyo, olufana nesitayile "sokudlala" kakhulu. Sineprinta zesikrini kunye nee-RGB ze-RX kuyo yonke indawo, kunye nokususwa ngokupheleleyo kwe-1,7mm. Kuthe cwaka, into exatyisiweyo, kwaye iphendula kakuhle. Asinakuthetha ngokufanayo malunga ne-trackpad, kubonakala ngathi incinci kwaye ayichanekanga, kodwa ayongxaki ngale khompyuter, kodwa phantse kuzo zonke i-Apple engazenziyo. Asinanto incinci yokuthetha ngokuzimela, kuya kuxhomekeka kakhulu kwimfuno yokudlala, ngaphezulu kweeyure ezimbini, sicebisa ukuba uyisebenzise.
Le laptop Inxalenye ye-1.299 yenguqulo yayo yokungena, ukuya kuthi ga kwi-1.699 euro Kwinguqulelo esiyivavanyileyo, enye indlela enomdla kakhulu kwizixhobo esinazo kwimarike ngenxa yoyilo kunye namandla ayo.
TUF Isikali F15
Ithunyelwe nge: 25 de julio de 2021
Utshintsho lokugqibela: 25 de julio de 2021
Uyilo loyilo kunye nezinto ezigqityiweyo
Izixhobo zokwenza izinto ukuze zitshatise nekamva elithembisayo
Iimvakalelo ezilungileyo zokusetyenziswa kunye nokunxibelelana
Kubandakanya iadaptha ye-A / C endaweni ye-USB-C
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Asus TUF Dash F15, amandla kunye noyilo zinokuhambisana
IAmazon ivuselela ulawulo lwezwi le-Alexa kwaye sayivavanya